ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား အပိုင်း(၄) | The Great and Terrible God - Part IV | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၁၂ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်
“ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား” ( နေဟ ၁း၅)။
ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားရှင်၏ သမ္မာကျမ်းစာတော်ဟူသောတရားဒေ သနာတော်သုံးခုကို ဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤတရားဒေသနာတော်အားလုံးကို ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ဟောကြားခဲ့သော “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သော ဘုရား”ဟူသော ဒေသနာတော်မြတ်မှ ကိုးကားဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (John R. Rice, D.D., The Great and terrible God, Sword of the Lord Publishers, 1977 edition, pp. 7-38).
“ဟာရီဧမာဆန်ဖေါဒစ်ခ်၏ The Modern Use of the Bible, ၌ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ယနေ့ခေတ်လူသားတို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဘုရားသခင်ဖေါ်ပြထား သောလူ့မှုကျင့်ဝတ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမရှိကြပေ။ လူတို့သည်(မယုံကြည်သူ) များအလား ဘုရားသခင်ကို မုန်းတီးကြပြီးမြည်တမ်းအော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်၊ ဖေါဒစ်ခ် ရည်ညွှန်းကိုးကားပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားကြသော သူတို့သည် ခေတ်အဆက်ဆက်ထာ၀ရဘုရား၏ တရားစီရင်ခြင်းကို မုန်းတီးခဲ့ကြသည်။ ထိုဘုရား သည်အပြစ်ကိုမုန်းတီးပြီး၊ အပြစ်မှနောင်တရရန်တောင်းဆိုနေသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါ သည်။” (ibid, p. 9). ဖေါဒစ်ခ်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သော စိတ္တဇဆေးရုံ၌ အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့သော၊ တရုတ်နိုင်ငံ ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာကြီး ဒေါက်တာ်ဂျွန်ဆုန်း၏ အသက်တာကို သတိရအောက်မေ့သင့်ပါသည်။ထိုအရာများကိုကြည့်သော် ဟန်ရီဧမာ ဆန်ဖေါဒစ်ခ်သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်၏အရှင်၊ ဘုရားရှင်ကိုမုန်းတီးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်! “ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း”ကို အင်တာနက်တွင်နှိပ်ဝင်ဖတ် ကြည့်နိူင်ပါသည်။
နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ဖေါဒစ်ခ်ကဲ့သို့၊ မယုံကြည်သူများသည်ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကားတိုင်းပေါ် ကိုယ်စားအသေခံခြင်းခံယူချက်ကို ရီချင်ဖွယ်သရော်ပြောင်လှောင်တိုက် ခိုက်ပြောကြားသည်မှာ၊”သားသတ်ရုံဘာသာရေးဟူ၍ ပြောင်းလှောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲသို့ ဆန့်ကျင်ရေးသမားအပြစ်သားတို့သည် လူသားတိုင်း၏ အပြစ်အတွက်ခရစ်တော်ကား တိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းအစီစဉ်ကို မုန်းတီးကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “ထိုသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ကားတိုင်ကိုရန်ဘက်ပြု၍ကျင့်သောသူ”(ဖိ ၃း၁၈) ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပြန်သည်မှာ “လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်း” (ဂလာ၅း၁၁)ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကားတိုင်တော်တရားသည် မိုက် သောတရားဖြစ်၏ (၁ကော၁း၁၈)ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် ကို ယုံကြည်လက္ခံသောသူတို့ကပင်၊ ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိုခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော ခံယူချက်ကိုတိုက် ခိုက်ဆန့်ကျင့်သူများလည်းရှိပါသည်!
ကားတိုင်တော်သည် အပြစ်သားတို့ကို ဆန့်ကျင်ရန်ဘက်ပြုသော ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော အမျက်ဒေါသပင်ဖြစ်သည်။ သားတော်ကိုပင်မညှာတာ၊ စာနာခြင်းမရှိ၊ ကားတိုင်တော်ပေါ်၌ အသွေးတော် သွန်းလောင်းအသေခံစေသည့်အထိ၊ ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရား၏ အပြစ်ဒေါသကိုသားတော်အပေါ် သက်ရောက်ခဲ့ သည်!။ြွစ> စြွ ခူass=ဓစမေa_ငညိနညအဓ>ခေတ်အဆက်ဆက်ထာ၀ရဘုရားသခင်သည် တိရိစ္ဆာန်အသွေးတော်အားဖြင့် သူ့၏ လူတို့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရရှိရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ယေရှုခရစ်တော်လက် ဝါးကားတိုင်တော်အပေါ် အသေခံစေရန်ပုံရိပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်းသည် လူသားထုတစ်ခုလုံး၏ အပြစ်ဆေးကြောရန်ဖြစ်ပါသည်၊ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းနှင့် ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ် အသေခံသည့်တိုင်နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ ကြားတွင်၊ ၄ပုံ၁ပုံသန်းခန့်သော တိရိစ္ဆာန်တို့သည် နှစ်စဉ်အသေခံရကြသည်။ ဆိုလို သည်မှာ ဂျူးဘာသာရေးပွဲတော်အတွက် တိရိစ္ဆာန်အသက်ပေါင်း၃၀၀သန်းသော သိုးတို့ သည် ထိုနှစ်တစ်လျှောက်အသေခံခဲ့ရသည်။ ထိုအရေအတွက်အထဲ၌ နေ့စဉ်ပူဇော်သက္ကာ ကို ရေတွက်ခြင်းမဟုတ်သေးပါ။ နွား၊သိုး၊နွားမငယ်၊ ချိုးငှက်၊ ခိုစသော တိရိစ္ဆာန်များအ သေခံခဲ့ရသည်။ အို! သွေးချောင်းစီးနေပါလား! အပြစ်မဲ့သောတိရိစ္ဆာန်တို့၏ အသွေး စွန်းခြင်းအားဖြင့် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားရှင်၏ အမြတ်ဒေါသကို လူတို့ အားသတိပေးနေဘိသည်! ထိုသတိပေးခြင်းမူကား၊ အပြစ်ကိုအသွေးတော်အားဖြင့် ဆေး ကြောရမည်ကို သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်ကာလအဆက် ဆက်တိရိစ္ဆာန်တို့၏ အသွေးချောင်းစီးခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏အမျက်ဒေါသက၊ ဣသရေလလူတို့၏ အပြစ်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပူဇော်စဉ် စီးကျသောအသွေးတော်သည် အပြစ် ကို ဘုရားရှင်ကတရားစီရင်ခြင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ အို! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား! အိုကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်လန့်ဖွယ်သောဘုရား!။ြွစ> စြွ ခူass=ဓစမေa_ငညိနညအဓကြွာလအချိန်ရောက်သောအခါ၊ သားတော်ယေရှုသည်နာကျင်စွာ ဝေသနာခံစားပြီး ဓမ္မဟောင်းကာလယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို အစားထိုးအပူဇော်ခံခဲ့သည်။ မျက်နှာတော်ကိုတံ ထွေးနှင့်ထွေးကြသည်။ နံဘေးတော်ကိုလှံချွန်ဖြင့် ထိုးဖေါက်ခဲ့သည်။ သေလုမတတ် ထိုးခြင်းရိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ခန္တာကိုယ်သည်လည်း ဒဏ်ရာအထပ်ထပ်အသွေးတော် လည်း မြေကြီးသို့စီးကျလေခဲ့၏။ ဆူးရစ်သာရဖူကိုခေါင်း၌ ဆောင်းစေကြသည်။ အဝတ် တော်ကိုချွတ်ကြပြီး၊ ကားတိုင်ကိုလည်းမနိုင်မနင်း အသေခံမည့်နေရာအရောက်ထမ်းစေခဲ့ ကြသည်။ သံမှိုဖြင့်ခြေတော်၊ လက်တော်ကိုစွဲရိုက်ခဲ့ကြသည်။ ပြင်းထန်သောစေသနာခံ စားပြီး ကားတိုင်ပေါ်ဆွဲထားခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ လူတို့သည် ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်ခြင်းကို ငေးကြည့်ကြသည်။ စီးကျနေသောအသွေးတော်ကို မြင်ခဲ့ကြသည်။ လူတို့သည်သရော် ပြောင်လှောင်ကြ၏။ ကားတိုင်ပေါ်၌ တွဲလောင်းနေစဉ်အသွေးတော်သည် တစ်စက်ချင်း စီးဆင်းနေသည်ကို လူတို့သည်မြင်တွေ့ရကြသည်။ အဆုံး၌ နာကျင်သောဝေဒနာတော်ကို ခံစားပြီးအသေခံသွားခဲ့ရသည်။ အိုအဖဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် ယေရှုကိုနှိမ့်ချစွာနှင့် နာကျင်စွာ ဝေသနာခံစားစေခဲ့သနည်း? အဘယ်ကြောင့်နည်း? အဘယ်ကြောင့်နည်း?
ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားရှင်သည် ထိုကဲ့သို့ရက်စက်စွာ အသေခံစေ ဖို့အစကတည်းက အစီစဉ်ရှိပါသည်! ထိုအစီစဉ်ကို ဘုရားရှင်မှ အစပြုခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားရှင်၏အစီစဉ်ကို လူဆိုးတို့အားဖြင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေရု က၊”ဘုရားသခင်ပြငှာန်းတော်မူသော အလိုတော်အားဖြင့်အနာဂတံသဉာဏ်တော်အား ဖြင့်၎င်း၊ အပ်နှံခြင်းကိုခံသော ထိုယေရှုကို သင်တို့သည်ဖမ်းဆီး၍မတရားသော သူတို့ လက်ဖြင့် လက်ဝါးကားတိုင်၌ရိုက်၍ ကွပ်မျက်ကြပြီ” (တမန်တော် ၂း၂၃)။လက်တော် ခြေတော်နှင့်နံဘေးတော်တို့၌ ထိုးဖေါက်ခြင်းခံရပြီး ကားတိုင်ပေါ်၊ လူဆိုးတို့အားဖြင့် ထိုအမှုကို ပြီးမြောက်စေဖို့ ဓမ္မဟောင်းကာလကတည့်က ကြိုတင်ဟောကြားခြင်းဖြစ် ပါသည်။ အို! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားသည် သားတော်ယေရှုခရစ်အား ထိုကဲ့သို့ နာကျင်စွာ အသေခံစေပြီးအပြစ်သားများကို အပြစ်ငရဲမှ ရွေးနုတ်ဖို့ရန် တောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်!
ထိုမျှမကသေးပါ၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံစဉ်တွင် နေ့ခင်း၌ပင်၊ အမှောင်ထုကျ ရောက်ခဲ့၏၊ ထိုစဉ်ခမည်းတော်သည် သားတော်ကိုစွန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုသည်အထီး ကျန်ဆန်စွာ တစ်ကိုယ်တည်း ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခဲ့ပါသည်။
(၁၉၁၄ခုနှစ်၊ ဘင်အိပ်ခ်ျ၊ ဖရိုက်စ်သီကုံးသော “အထီးကျန်” )။
ဆာလံ ၂၂း၁၌ ယေရှုဘုရားကားတိုင်ပေါ်ငိုကြွေးအသေခံသည့်အကြောင်း ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ “အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား အဘယ်ကြောင့် စွန့်ပစ်တော်မူသ နည်း?” (မဿဲ၂၇း၄၆)။ ဘုရားရှင်က စွန့်တော်မူခဲ့သည်။ မျက်နှာတော်ကို လွှဲတော်မူခဲ့ သည်။ အကယ်၍ ဘုရားရှင်သည်ယေရှုကိုစွန့်တော်မမူခဲ့လျှင်၊ ဘုရားရှင်သည်အပြစ် သားတို့ကို စွန့်ပစ်ခြင်းကို အစားထိုးဝင်ရောက်အသေခံခြင်းမမည်ပါ။
-အပြစ်သားတို့ကို ကယ်တင်လိုငှါအထီးကျန်ဆန်စွာ ကားတိုင်ထက်
စွန်းပယ်ခြင်းခံရသည့်တိုင် ထာ၀ရအသက်ကို လူတို့အားပေး
လူဆိုးတို့က ယေရှု၏မုတ်ဆိတ်ကိုအားနှင့်ဆွဲသောအခါ ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တုတ်ချောင်းနှင့်ရိုက်နှက်သောအခါပို၍ ဝေဒနာခံစားရမည်ဖြစ် သည်။ ဆူးရစ်သာရဖူကို အတင်းအကြပ်ဆောင်းစေသောအခါပို၍ နာကျင်ပါမည်။ ကျူ လုံးဖြင့် ကျောပြင်ကိုရိုက်သောအခါ၊ ခါးသီးစွာသော ဝေဒနာကိုအမှန်ခံစားခဲ့ပါသည်။ လူအများတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ဝေဒနာကိုခံစားပြီး အသေခံခဲ့ကြသည်။ ခြေတော်လက် တော်တို့၌ သံမှိုဆဲGရိုက်ခြင်းဝေသနာသည်၊ နုတ်မမြွက်နိုင်အောင်စူးရှ သောဝေဒနာပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသေအချာပြောနိုင်သည်မှာ၊ ကားတိုင်ပတ်လည်၌ စောင့်ကြည့်နေကြ သောသူတို့သည်လည်း ထိုဝေဒနာကိုမြင်ရသော် နှလုံးကြေကွဲကြ မည်ဖြစ်သည်။
ယုဒသည်ယေရှုကို သစ္စာဖေါက်ခဲ့သည်။ ပေတရုသည်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ တပည့်တော်အားလုံးတို့သည် ယေရှုကိုစွန့်၍အဝေးသို့ပြေးထွက်ခဲ့ကြပြီ။ ဖျားနားခြင်းဝေ ဒနာမှ သက်သာရသောသူများနှင့် အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ မြင်ခဲ့ကြသူတို့လည်း ယေရှု ကိုပြောင်လှောင်ခဲ့ကြပြီ။ အသက်ပေးမည်သူကို အသေသတ်ခဲ့ကြပြီ။ ကျေးဇူးကန်းလုပ် ရပ်များက ယေရှုအားဝမ်းနည်းစေခဲ့ကြပြီ။
အဖခမည်းတော်၏ ကားတိုင်ပေါ် စွန့်ပယ်ခြင်းထက်နာကျင်သော ခံစားမူဆိုတာမရှိ နိုင်ပါ။ အိုး ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား! အပြစ်သားတို့၏နေရာ၌ မိမိသား တော်ရင်းကို အသေခံစေသည့်တိုင် စွန့်ပယ်ခြင်းခံရသည့်တိုင်၊ စီရင်ခြင်းကားအဘယ်မျှ ကြီးမြတ်ပါသနည်း! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားသည် ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်သားများအတွက် သားတော်ကို စေလွှတ်အသေခံစေခဲ့ပြီ!
အပြစ်သားတို့သည် အပြစ်ဒဏ်မှလွန်မြောက်ဖို့ရန်၊ ထိုကဲ့သို့ကြောက်လန့်ဖွယ်ပေး ဆပ်ခြင်းအဖိုးအခကိုတောင်းဆိုခြင်းသည် အံ့ဩဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ အပြစ်သားတို့အဖို့ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ယေရှုနှလုံးကြေကွဲရခြင်းအတွက်လည်း အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ ဘူး။ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား!သည် အပြစ်ကိုရွံ့မုန်းသောဘုရားဖြစ်၍ ဖြစ်သည်!။ြွစ> စြွ ခူass=ဓစမေa_ငညိနညအဓဩွို့ပါသော်လည်း! ထိုအချိန်အဖခမည်းတော်ကို ကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါ ငိုနေသည် ကိုမြင်ယောင်မိသည်။ ဘုရားသခင်သည် နှလုံးကြေကွဲခဲ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ဖြစ်ပါ သည်။ “ဘုရားသခင်သညမိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင် အောင်လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏” (ယောဟန်၃း၁၆)။ ယေရှုဘုရား၏ဝေဒနာ တော်ခံစားရခြင်ကို ကျွန်ုပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဖခမည်းတော်သည်လည်း ထပ်တူ ထပ်မျှ ဝေဒနာတော်ခံစားခဲ့ရသည်။ သားတော်ယေရှုခံစားရသော ဝေဒေသနာတော်သည် ခမည်းတော်၏ စိနှလုံးသား၌ခံစားခဲ့ရသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ထက်၌ နာကျင်စွာဝေဒနာ ခံခြင်း၏ နှလုံးကြေကွဲခြင်းဖြင့် အဖဘုရားသခင်သည် နာကျင်စွာ အပြစ်သားတို့ဝေဒနာခံ စားခြင်းမှ ထာ၀ရချမ်းသာခြင်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်! အိုး ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား! ကိုယ်တော်၏ သနားခြင်းဂရုဏာတော်သည် ကြီးမြတ်လွန်း လှပါတကား!
ပရောဖက်နေဟမိက ဘုရားရှင်သည် “ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော” ဘုရားဟုခေါ်ခြင်း သည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဒံယေလကလည်း ထိုအရှင်သည် “ကြီးမြတ်၍ အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်သောဘုရား”ဟူ၍ခေါ်ပါသည်။ ထိုသူနှစ်ဦးစလုံးက ထိုအရှင်သည် “သနားခြင်းဂရုဏာတော်ရှိပြီး သူ့အမိန့်တော်ကို ထိန်းသိမ်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည် ဟုပြောကြားခဲ့သည်။” ယေရှုဘုရားသခင်၏ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုကြည့်သော်၊ ဘုရားသခင်သည် တရားစီရင်ခြင်းသက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ၊ အပြစ်သားတို့အပေါ် သနား ခြင်း၊ ဂရုဏာတော်သက်ရောက်လျှက် တည်ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ဘုရား သခင်သည် သင့်ကိုချစ်နေသကဲ့သို့ အပြစ်သားတို့ကိုချစ်သောဘုရား၊ သင့်အပြစ်နေရာသို့ အစားဝင်အသေခံသည့်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့သောဘုရား!၊ ဂရုဏာရှင် ဘုရားဖြစ်သည်!
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်၏ အမျက် ဒေါသကို လျှော့ပါးပြီးဖေါ်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်သော ဘုရားဖြစ်သည်။ သူ့အမျက်ဒေါသည် အပြစ်သားတို့၏အပြစ်ရှိသမျှအပေါ် ကြောက်ရွှံ့ ဖွယ်ဆန့်ကျင်နေသည်။ ထိုအပြစ်တရား၏ စီရင်ခြင်းအမျက်ဒေါသမှ၊ သင်ရှောင်ရှားနိုင် မည့်၊နည်းလမ်းတခုသာရှိသည်။ ထိုအရာသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါက၊ ဘုရားသ ခင်ထံတော်ပါးက၊ သနာခြင်းဂရုဏာတော်ကို မြင်တွေ့မည်ဖြစ်သည်! အမျက်တော်သည် သင့်ဆီမှလွဲသွားပါလိမ့်မည်။ သင့်အစား၊ အသေခံပေးဆပ်ခဲ့သော ယေရှုဘုရား၏ပူဇော် ခြင်းအားဖြင့် သင်သည်ချမ်းသာခြင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မိန့်တော်မူ သည်ကား “သားတော်ကို ယုံကြသည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ မယုံကြည် သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏”(ယောဟန်၃း၁၈)။ သင်ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ခဏ တွင်၊ သင်သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကို မခံရပြီ! အကယ်၍ ဆက်ပြီးငြင်းပယ်မည်ဆိုလျှင် “ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်”
ယေရှုသည် သင့်ကဲ့သို့အပြစ်သားတို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်! သင့်အပြစ်ကြွေးရှိ သမျှပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်! သင်ယေရှုထံချဉ်းကပ်စဉ်ခဏတွင် သင်သည်ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးက၊ ငြိမ်းသက်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။ သင်ယေရှုခရစ်ထံတိုးဝင် ချဉ်းကပ်စဉ်ခဏတွင် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားရှင်၏ တရားစီရင်ခြင်းမှ သင်လွတ်မြောက်ခံစားရမည်ဖြစ်သည်!။ြွစ> စြွ ခူass=ဓစမေa_ငညိနညအဓ>ဒေါက်တာ အာဆာဟေလ်နက် ဆင်လ်တန်၏ ဓမ္မသီချင်းတပုဒ်က သင့်တို့ကိုအ ထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တရားမဟောခင်က မစ္စတာဂရိဖက်စ်က ထိုသီချင်း ကိုသီဆိုခဲ့သည်။ သူ့ကိုဆက်လက်ပြီး ဆိုပေးစေချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သီချင်းစာ သားကို အလေးထားနားထောင်ပေးကြပါ!
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး(၁၇၂၂-၁၇၆၅ ခုနှစ်၊ အီမပ်ခ် ကျုံးရေးသားသီကုံးသော ပေးဆပ်ပြီး” )။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၂၇း၂၆-၃၅ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်ခ်မှ ၁၇၂၂-၁၇၆၅ အတ်မပ်တ်ဂျူံးရေးသားသီကုံးသော “ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆို ပါသည်။